Myanmar Dev Jobs - Developer/Designer Blog
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း Developer/Designer ဖြစ်တဲ့အတွက် Developer/Designer တွေအတွက်အသုံးဝင်မယ့် blog articles လေးတွေရေးပြီးတော့ share ထားတာလေးတွေကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်...
ရုံးပိတ်ရက် Online မှ Courses များမှအသစ်လေ့လာချင်သူတွေအတွက် Learning Website သုံ...
What's Myanmar Dev Jobs Freelance Tab?
Freelance Tab ဆိုတာဘာလဲ… အားလုံးဒါကိုသိချင်နေကြမှာအမှန်ပါဘဲ။ Freelance Tab ဆိုတာ Freelance Developer/Designer တွေ register လုပ်လို့ရမယ့် Navigation Tab တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Myanmar Dev Jobs မှာ Freelancers အဖြစ် Register လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလျှင် Freelancer ရှာနေတဲ့အလုပ်ရှင်တွေက MyanmarDevJobs မှ Freelancer တွေကို Direct Connect လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
YGNCode YouTube Channel
အပတ်စဥ် Monday တိုင်းမြန်မာဘာသာဖြင့် Video Tutorials တွေဖော်ပြပေးမယ့် YouTube Channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe မလုပ်ထားရသေးတဲ့သူတွေ YGNCode YouTube Channel မှာ Subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့ MyanmarDevJobs မှာ Developer/Designer အလုပ်တင်သင့်တာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Company တော်တော်များများမေးလေ့ရှိတဲ့ ဘာလို့ MyanmarDevJobs မှာအလုပ်တင်သင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ Programming လေ့လာဖို့အကောင်းဆုံး website4site ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ website တွေကတော့...
Junior Developer တစ်ယောက်အနေနှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်လို Improve လုပ်မလဲဆိုတဲ့ Tip...
မြန်မာနိုင်ငံက Developer တွေလစာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာသိဖို့ MyanamrDevJobs က Survey ကောက်လိုက်တာ စုစုပေါင်းအယောက် ၆၆ လောက် survey ဖြေပါတယ်။
Our Top4Developer Must Visit Sites
MyanamrDevJobs မှ Developers တွေက Developer တွေအတွက်အကြိုက်ဆုံး Website4ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
Addy Osmani ဟာ အခုဆိုရင် Google ရဲ့ Chrome team မှာ Engineering manager အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသူ တစ်ယောက်ပါ။ Yeah Google :smile:
Digital Royal Net Solution ရဲ့ Co-Founder & CTO ဖြစ်တဲ့ ကိုမိုးဟိန်းကျော်နှင့် အ...
? MyanamrDevJobs - မင်္ဂလာပါ အစ်ကိုရေ... အစ်ကိုအကြောင်းလေးအရင်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး ( အစ်ကို Programming ကိုစလေ့လာခဲ့တာလေးကောပေါ့ )
? ကိုမိုးဟိန်းကျော် - မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့် နာမည် မိုးဟိန်းကျော်ပါ။ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေက ဝေယံ လို့ခေါ်ပါတယ်။ Digital Royal Net Solution ရဲ့ Co-Founder & CTO အနေနဲ့ တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ (၆)တန်းကျောင်းသားလောက်မှာ အမေ့ရုံးကိုလိုက်သွားရင်း Computer နဲ့စပြီး ထိတွေ့ဖူးခဲ့၊ ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ ဆော့လွန်းလို့ငြိမ်ဆေးကျွေးထားတဲ့ သဘောပါ ?။ နောက်ပိုင်းကျောင်းမှာ Computer ပန်းချီပြိုင်ပွဲတွေဘာတွေရှိရင် ကျွန်တော်က ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လုပ်တတ်မှန်းသိတော့ သွားပြိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျွန်တော်က ကူရတယ်။ ဆရာကြီးလုပ်ရတာပေါ့ ?။ (ကိုယ့်တော့ တစ်ခါလားပဲ ပြိုင်ခိုင်းတယ် ပြောင်ချော်ချော်လုပ်လွန်းလို့ထင်တယ်။) ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်း သိတာ ဆိုတော့ ဘာမှသာရေရေရာရာ မတတ်တာ၊ ဆယ်တန်းအောင်ခါစ ကတည်းက Programming ဘာမှန်းသိတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း IT Diploma တက်ရင်း Programming စလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
? MyanamrDevJobs - မင်္ဂလာပါ အစ်ကိုရေ... အစ်ကိုအကြောင်းလေးအရင်မိတ်ဆတ်ပေးပါဦး
? ကိုနိုင်ဝင်း - မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော့နာမည်ကတော့နိုင်ဝင်းပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့မှာမွေးပြီး ရန်ကုန်မှာ Web Developer လုပ်နေတဲ့ တောသားတစ်ယောက်ပါ။
? MyanamrDevJobs - မင်္ဂလာပါ အစ်ကိုရေ အစ်ကိုအကြောင်းလေးအရင်မိတ်ဆတ်ပေးပါ့လား
? ကိုဉာဏ်ဝင်း - ကျနော့်နာမည်ကတော့ ဉာဏ်ဝင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ တော်တော်များများသိတာကျတော့ ပြည့်စုံငြိမ်းပေါ့ (အဖေပေးထားတဲ့နာမည်)။ကျနော့်ကို ပူတာအိုမြို့မှာမွေးပါတယ်။ယခုလောလောဆယ်တော့ Freelance web developer တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေပါတယ်။